Akụkọ - Picosecond Nd: YAG ọgwụgwọ laser
Afọ ： 21.
ọrụ ： Mmụta
nziputa ： A na-eji njiri mara aja ma ọ bụ nke gbara ọchịchịrị nke nwere ntụpọ, gburugburu, oval ma ọ bụ nke na-adịghị mma. Kè ahụ doro anya, dayameta dị ihe dịka 2mm, elu ahụ na-adị larịị, dịpụrụ adịpụ ma ghara ịgbanye, na nkesa ahụ dị iche.
nchoputa ： freckle
Nyocha nke ọrịa ： Onye ọrịa ahụ na - akpali mkpụrụ ndụ ihe na - acha uhie uhie kwa mgbe kwa mgbe anwụ na - acha ọkụ ọkụ, ma na - emepụta ụyọkọ melanin dị ukwuu iji kpalite tyrosinase. Dopa na-eme ka oxygen dị na merosin tyrosinase; ma na-emebi arụ ọrụ metabolic nke mkpụrụ ndụ akpụkpọ ahụ. A naghị ewepụta melanin nke ọma ma na-anọgide na akpụkpọ ahụ, si otú ahụ na-akpụ ntụpọ.
Freckle ọgwụgwọ ụzọ
Igwe eji: picoseconds
Ọgwụgwọ: izu 4 nkeji oge, nkeji abụọ na mkpokọta
Zie zie: 4-6
Pulse ụdị: otu usu
Ọgwụgwụ ahụike: whitish
Aha ： 李 **
Afọ ： 44.
ọrụ ： Waiter
Mgbaàmà ： Enwere agba aja aja n'akụkụ nkwonkwo ụkwụ na anya, nkesa na-ekesa, ókèala na-edoghị anya, enweghị ihe mgbaàmà nke onwe ya na ọrịa niile.
Nchoputa: chloasma (ntụpọ hip, ntụpọ imeju, ntụpọ afọ ime)
Nyocha nke ọrịa n'ihi ogologo oge nke ihe ịchọ mma dị ala, onye ọrịa ahụ emeela ka eriri ahụ dị njọ, mebie mgbochi akpụkpọ ahụ, belata sebum nzuzo site na gland sebaceous, belata ikike nke anụ ahụ iji gbochie ụzarị ultraviolet, na nsogbu endocrine, si otú a na-akpụ ntụpọ .
Treatmentzọ ọgwụgwọ Chloasma
Ihe ngosi ： chloasma
igwe eji ： Picosecond Laser
usoro ọgwụgwọ ： oge etiti: 5weeks, ngụkọta 6 sessions
ogologo ntụgharị ： 1064nm
ntụpọ nha ： 7-9
Ike ： 80-240mj
Ugboro ugboro ： 5-7HZ
Pulse mode ： Ugboro abụọ usu
Clinical ọgwụgwụ ： akpụkpọ ghọọ obere nācha ọbara-ọbara
3: Tattoo mwepụ
Aha ： 宋 **
Afọ ： 29.
ọrụ ： na-enweghị ọrụ
Bọchị Ọgwụ ： 2018.5.11.
nziputa ： egbu egbu na aka
6.3cm ogologo 4.1cm obosara
nchoputa ： akara na aka
Igbu mwepụ ụzọ
Ihe ngosi ： egbugbu
Ọgwụgwọ ： Oge izu 8, ngụkọta ọgwụgwọ 4
ntụpọ nha ： 4-5
Ugboro ugboro ： 1-4HZ
Pulse mode ： Single usu
Ọgwụgwụ Clinical ： Whitening
Oge ọgwụgwọ mbụ na-eji obere oge）
Ọrịa Co2 Laser, Shr Ipl Opt, otutu mwepụ mwepụ, Ems Akwara mkpali Machine, Co2 Fractional Laser Machine, Shr Opt Ipl Nwepu Ntutu,